विदेशबाट आउने सबै नेपालीको स्वागत गर्न महानायक हमालको आग्रह, भन्छन् ‘- के प्रेम र स्नेहको हार भएकै हो ?’ – Khabar Silo
विदेशबाट आउने सबै नेपालीको स्वागत गर्न महानायक हमालको आग्रह, भन्छन् ‘- के प्रेम र स्नेहको हार भएकै हो ?’
Posted on June 25, 2020 June 25, 2020 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौं – विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण अहिले विश्वका धेरै देश प्रभावित भइरहेका छन् । कोरोनाको रोकथामको लागि धेरैजसो देशमा लकडाउन पनि गरिएको छ । कोरोना रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनका कारण विदेशमा रोकिएका नेपालीहरु अहिले स्वेदश ल्याउने काम भइरहेको छ ।
अन्य देशबाट नेपाली ल्याउदा कोरोना सर्ने डर पनि भइरहेको छ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसक्दा एक किसिमको त्रास पनि बढेको छ ।
यसैबीच नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित अभिनेता राजेश हमालले यस्तो अवस्थामा विदेशबाट आउने सबै नेपालीको स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भिडियो शेयर गर्दै कोरोनाभाइरसको महामारीमा दिनहुँ घर फर्किरहेका नेपालीलाई नमस्तेसहित न्यानो स्वागत गर्न आह्वान गरेका हुन् । युनिसेफको ‘हाम्रो नमस्ते’ अभियानमा सहभागी हुँदै हमालले उक्त अभिव्यिक्त दिएका हुन् ।
उनले भिडियोमा अनिश्चितता र चुनौतीको यो समयमा देशका हजारौँ नागरिकहरू सुरक्षा तथा सहायताका खोजीमा आफ्नो घर फर्किरहेका छन् भन्दै भनेका छन् उ छोरा कसैको, उ छोरी कसैको उ बुबा कसैको, उ आमा कसैको, दाजु दीदी, साथि, श्रीमान् वा श्रीमती पनि, जे हुन् तर हैनन् पराय, आफ्नै त हुन् नी, हुर्के बढे यही आँगनमा खेले यै माटोमा, बसायौ हामिले उनलाई सधै हाम्रो आखाँमा जब आयो अनयास त्रास कोरोनाको बिन भए उनीहरु पराय । के यसैलाई भनिन्छ परिवार ? मानेकै हो हामीले प्रेम र स्नेहको हार ? उनले भिडियोमा स्वदेश फर्किरहेका आप्रवासी कामदारहरूको पक्षमा एकजुट भई हौसला बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आजभोलि फिल्म ‘द स्काइ इज पिंक’ को प्रचारमा व्यस्त छिन् । यसै अवसरमा उनले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइरहेकी छिन् । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले आफ्नो जीवनसँग जोडिएका कैयन् कुराको खुलासा गरेकी छिन् । अन्तर्वार्ताका दौरान प्रियंकाले आफ्ना पति तथा कलाकार निक जोनसका बारेमा पनि कैयन् राज खोलेकी छिन् । चोपडाले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा […]
पारसले विवाह अस्वीकार गर्दा जीवनबाट विदा लिने मोडमा पुगे : सोनिका रोकाय
काठमाडौं । चर्चित मोडल एवं युट्यबर सोनिका रोकाय यतिबेला फेरी चर्चामा आएकी छिन् । उनी पूर्व युवराज पारससँग जोडिएर चर्चाको विषय बन्न पुगेकी हुन् । देशभर राजा आउँ देश बचाउँको नारा गुञ्जदैँ गर्दा सोनिकाले सार्वजनिक गरेको एक भिडियो हंगामा मच्चाएको हो । उनले आफुले पारसलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा पारसले यो हुन सक्दैन भनेपछि आफुले अब […]
‘गुडियारानी’ नायिका सुहाना थापाको लोभलाग्दो तस्बिर ( हेर्नुहोस् तस्बिर )
ए मेरो हजुर ३’बाट काठमाण्डौमा आयोजना भएको ‘डी सिने अवार्ड’मा उत्कृष्ट डेव्यु नव-नायिका भएकी छिन् । उनि नेपाली चलचित्रमा आउनु भन्दा पहिले अमेरिकामा अध्यनरत थिइन् नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पछिलो समय निकै चर्चामा रहेकी नव-नायिका हुन् सुहाना थापा । उनले आफ्नै होम प्रोडक्सनले निर्माण गरेको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ बाट नेपाली रजटपट मा भित्रिएकी हुन् […]
सेनाको जागिरले भलिबलमा मौका, मौकामा सुनिताको चौका
आज राति ठूलाे पानी पर्न सक्ने